mgbere - ebe ụlọ ọrụ na-erite uru site n'ikwu okwu na ịkekọrịta otu ha si emezi nsonaazụ ndị ahịa, ha anaghị anwa imeri ma ọ bụ ree otu onye na-ege ntị site na ịkọwa ozi gburugburu otu ikpo okwu. Nsogbu nke ndị na-ere ahịa bụ na ha niile na-alụ ọgụ maka mmefu ego site na ibe ha ma ha niile kwenyere na ha bụ etiti nke ụwa. O buru na inwere ebe ikpo okwu SEO, SEO bu azịza ya. Y’oburu na inwee ihe ngosiputa Social Media, Social Media bu azịza ya. Ọ bụrụ na ị nwere ikpo okwu email, email bụ azịza ya.
Enwere nguzozi siri ike nke bọket atọ na Social Media Marketing World ma enwere m mmetụta nke ịbụ ihe ùgwù ịbụ ọkà okwu nke gụnyere ọtụtụ oge. Otú ọ dị, enwere m ntakịrị iwe, na ụfọdụ ihe omume ebe m na-ahụ bọket # 2 na # 3. Amaara m na m na-ele mmadụ anya n'ihu n'ihi na anyị bụ ndị na-eme… mana ka m na-agwa ndị bịara, nzaghachi bụ mgbe niile otu… olee otú m mejuputa atụmatụ ndị a.
Ndị bịaranụ anaghị aga ogbako na-enweghị itinye ego… ụgbọelu, ụlọ nkwari akụ, tiketi, nri… nke ahụ bụ ezigbo ego maka ọtụtụ ndị bịara. Ọ dị oke mkpa na ha ga-ahapụ nzukọ ahụ site na ozi ha chọrọ iji kwalite mmemme ha n'ihu. Obi dị m ụtọ na ndị nọ na Social Media Examiner nwere nguzozi dị otú ahụ na egwu ha - ọ bụrụ na ị banye maka a virtual tiketi, ị ga-enweta ozi ị chọrọ! Ọ bụghị niile sessions mere… ma ihe karịrị iji mee ka ọ baa uru!